The Irrawaddy's Blog: မြို့မေတ္တာခံယူမယ့် ဖားမင်းဆွေ
ဖားမင်းဆွေရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေပါ။ NLD ရုံးရှေ့မှာ အခုလို ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေပါတယ်။ သူ့ဆောင်းပါးတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မဖတ်လို့တဲ့။ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လည်း သူက ငါး ဆိုတော့ လူမှ မဟုတ်ဘဲလေ။ သူ့ဆောင်းပါးတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖတ်လို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။ -
Whatever it is, he is very strange.Please be careful him to approach to Daw Suu. He has abnormal mindset.
Agreed. He looks so serious. Be careful of this mad guy.
To Phar Min Swe or Ngar Min Swe,
Our country becomes poorer than before within 22 years which is because of Amay Su? Is it not because of your intelligent Junta Goverment who take over everything of our country? Asaman, do you haveacourage to blamealady who is in house arrest nearly 15 years, giving up everything of her for our people? Very shameful for you. I can find no word to say the kind of evil person as you. Please don't try to help only Amay Su as her driver, be fair, please help to all poor people of our country as driver as you said because of they need helps more than Amay Su, then I'll appreciate you in advance on behalf of our people. Seems your eye only can see Amay Su.
New name for him NWAR MIN SWE from now on he will eat Kywat yoe
ပေါက်ကရတွေ မလုပ်ပါနဲ့ ဟေ့ကောင်။
yes absolutely abnormal mindset. Not only crazy, full with shit in his brain. Unbelievable....
ဖားမင်းဆွေ(သို့) ငါးမင်ဆွေဆီစာရေးတာဖြစ်ဖြစ် ကွန့်မန့်ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်
မြန်မာလိုတွေရေးကြပါ။။ အင်္ဂလိပ်လိုသူဖတ်တတ်ချင်မှတတ်မှာပါ။ (တတ်ချင်လဲတတ်နိုင်ပါတယ်)။။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလိုထိထိမိမိလေးရေး
တာ သူသိလို့ဖတ်ကြည့်ရင် သူပိုနာ မှာပေ့ါ။ပိုရှက်မှာပေ့ါ။ မင်းသား လွင်မိုးကိုရေးသလိုမျိုးပေ့ါ။ မြန်မာပြည်သူတွေလဲအကုန်သိနိုင်တာပေ့ါ။ အထက်မှာ
ရေးထားတဲ့ ကွန့်မန့်တွေအတိုင်းပဲ ကျွန်တော်လဲထင်ပါတယ်။ ရူးနေတဲ့ပုံပါ။
DMM said... :
ငါးမင်းဆွေခင်ဗျား အမေစု ကို သွားမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ခင်ဗျားဖာသာ ခင်များ အေးအေးနေပါ။ အမေစု က ခင်ဗျားဆောင်းပါးတွေလဲ ဖတ်မှာ မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆိုရင် နွားမွေးပြီး နွားမင်းဆွေ နံမည်ဖြင့် အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဆောင်းပါးများ ရေးပါက ပိုမို သင့်တော်ပါမည် ခင်ဗျား
အမေရေ ရပ်တောပြီး နောက်ထပ် အရူးတစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာပြန်ပြီ သတိထားပြီး ရှောင်ပါ အမေရယ်
ဥပဓိကိုကြည့် said... :
ဒီရုပ်ကို သေသေခြာခြာမှတ်ထားလိုက်ပြီ တွေ့တဲ့နေရာ ဆော်မှာပဲ
He don't know himself.He look likeafool!
တောင်ပေါ်သား said... :
နာမည်နဲ့လိုက်တယ်... ငါးကစ်ပြီး ကြောင်တောင်တောင် နဲ့ ခြီးပန်းနေတာ ဖြစ်မှာ...... ဟိုကောင် ချုပ်ထီးအောင်သိန်းလင်း လို ချုပ်တထီး ကျွေးလိုက်မှ ပြေသွားမယ်......ကောင်းလိုက်တဲ့ နအဖ ဖော်လံဖား ဆာရေး ဆြာကြီး.... အာရုဏ်ဦးမှာ ရူးသည့်ငါ ဒါရိုက်တာ နောက်ကို လိုက်တော့မယ် နဲ့တူတယ်.....
သူအကြောင်းနည်းနည်းတော့ကြားဖူးပါတယ်။ လူကိုတော့ အခုမှမြင်ဘူးတာပါ။
ရုပ်ကိုကြည့်ရင်ပဲ ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်သူ၊ လူကန့်လန့်လူဂွစာလုပ်ချင်သူ၊ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ငါ၏အတ္တ၊မှန်ဝါဒဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိသူ၊ သာပေါင်းညာစားလုပ်တတ်သူမှန်း သိသာပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်ထိရောက်နေပြီးတော့ အမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အသိတရားမရှိသေးပဲ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက် အမှိုက်တစ်ဖတ်လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် သနားစရာပါ။ (ကျုပ်ထက်အသက်ကြီးတာ သေချာပေမယ့် ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ပြားမှရှိတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက် ရိုသေသမှုနဲ့ပြောနေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်)
ပြောလာတယ်ဆိုတော့ အန်တီစုလုံခြုံရေးကိုပိုဂရုစိုက်ရတော့မယ်။ အစိုးရကအကွက်တွေစဆင်ပြီးတိုက်ခိုက်လာပြန်ပြီလားလို့တွေးမိတယ်။ အင်း..ဒီလူကလဲမြှောက်ပေးတိုင်း........တက်အောင်ကတယ်လို့ဆိုတဲ့
စကားပုံထဲကလိုတော့ဖြစ်နေပြီ။ သူ့လိုဦးနောက်မရှိတဲ့လူတွေ နအဖ စစ်အစိုးရမှာအများကြီးပဲနော်.........ဟီဟီ...အုံ့သစရာုကီး.......
Taw Lu Thit said... :
တကယ်က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေနှင့်အတူ ဆိုတဲ့ တီရှပ်ကို ၀တ်ရမှာ
အောက်က ဖားမင်းဆွေပေါ့...ဘာဖြစ်လဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖားတာကို လူသိအောင်ကြေငြာတာပဲ.အဲ့ဒီဟာက ကိစ္စမရှိ ဒီလူကို အန်တီစုနဲ့တွေ့ပေးလဲ ပေါကြောင်ကြောင်တွေပြောပြနေလို့ အန်တီစုပါ စိတ်ထပ်ညစ်ရဦးမယ်.ထောက်လှမ်းရေးက မြှောက်ပေးလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်
please overcareful to handle this guy, he is very dangerous for every person and organisation. I agree for any disagreement in the democratic society but have to take responsibility and not to harm others too.
ခွေးလေးခုန်လို့ ဖုန် မထ ပါဘူးဗျာ၊ ခွေးဟောင်တိုင်း ထ မကြည့်ကြပါနဲ့၊ ခွေးမသား မင်းဆွေ လို ကောင်မျိုးကို သောက်ဖက်လုပ်မနေကြပါနဲ့
အင်း ဖားတာတော့ဖားကြပါ တရားလွန်ဆိုရင်တော့ လူအမြင်
သွားတွေ့တယ် တော်တော်လေးကို မဟုတ်တန်းရားရေးတဲ့
လူပဲတော်တော်လည်း အံသြဖို့ကောင်းတယ် ဗျာ
phyukoko said... :
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတို့ ရေ ... တို့ တတွေစည်းလုံးထားမှ .. စိတ်ဓါတ်တွေ ပြတ်သားထားမှ.. အသိဥာဏ်တွေ အားကောင်းမှ. ဘယ်အခြေနေမျိုး မဆို အမှန်ဘက်က ရပ်တည်ရဲမှာ..တရားအမှန်ဆိုတာ မှန်ကန်ရင် အားသန်ပါတယ် ကွာ..
မတရားမှုများလာရင်ပျက်ဆီးမှာပဲ. မိမိနှင့် အနီးဆုံးပတ်ဝန်းကျင် အတွက်အကောင်းဆုံး ပြုမူလုပ်ကိုင်မှုတွေ နှင့် ဖြစ်သင့် လုပ်သင့်တဲ့ အမှန်တရား အတွက် တန်ဖိုးရှိရှိ စိတ်နှင့်ခန္ဓာ ကို အသုံးချသွားရ အောင်....
သတိထားကြပါ said... :
သူ့ကြည့်ရတာ စိတ်နှံ့ပုံမရဘူး။ ရူးနေပုံပဲ။
one of the reason I've I ever have joy in my life will be I am not that Ngar Min Swe ..
mgmoe said... :
ငါးပုပ်ထဲက လောက်ကောင်( မင်းဆွေ ) ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ မကြံပါနှင့် ....
ဆောရီးပါ။ အခုအန်မိသွားပြီ။ ရုပ်ကိုမြင်လိုက်လို့။
Look at his image, we can obviously see his dishonest, insincerity, indecent look and un-innocent image. He looks likeawitch .. I think he should not even be allowed to come nearer to Daw Aung San Suu Kyi .. He might have something on his mind which might definitely be NOT GOOD for Daw Suu .. Be watch him out properly ..
t zaw; စာပေသမားရုပ်ရည်ကလည်း ဖာခေါင်းရုပ်ကြီး၊၊ ဆောင်းပါးတွေကို အမေစုတော့ပေးမဖတ်နဲ့၊ သေမှ ငရဲမင်းကိုပေးဖတ်လေ ဖားမင်းဆွေ၊၊ ငွေလိုချင်တာများဖားရေးနေရင်လက်ညှောင်းပါတယ် မင်းမိန်းမကို သန်းရွှေကြီးနဲ့ ပေးအိပ်လိုက်လေ၊၊
အမေစု .. သတိကြီးကြီးထားပါ။ အမေစုက ရုံးမှာ ရန်ကုန်မှာ နေတာတောင် ပြဿနာက NLD ရုံးအရောက်လာနေပြီ။ အမေရယ် နယ်ကိုသာသွားလို့က အန္တရာယ်များဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ သားတို့သမီးတို့ အလွန်ပင်စိုးရိမ်ရပါ တယ်။ အမေစုကို ၀န်းရံစောင့်ရှောက်ပေးကြပါ။ မသမာသူဦးဏှောက်နည်းသူ တစုကြောင့် နိုင်ငံ့မိခင် အန္တရာယ်ရောက် အသက်ပျောက်ရနိုင်ပါတယ်။
Beware!The mad dog will bite you.
ကနေဒါ မင်းဆွေ နဲ့ ဘာကွာသလဲဗျို့
မြတ်ရွှေဂူ ပတ မြားကိုလ
ပွတ်လေ လေ ဂူရွှေမှာ
အရောင် ထွက်တယ် ရှေးကထက်ကဲ
ဒီလူက ကြံဖွတ် ဉက္ကဌ ရုပ် လိုလို စွအားရှင်က ရုပ်လိုလိုနဲ....သတိထာကြ
ဒီလူကမှ နိုင်ငံရေး ရန်သူစစ်စစ် န၀တ ထက်အောက်တန်ကျတဲ ပုံဘဲ......
ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး....ဝေးဝေးရှောင်ကြ...နောက်တခါလာရင် အေးအေးဆေးဆေးသာတောင်ပန်ပြီး မြန်မြန်ပြန်သွားအောင်သာကြိုးစာကြပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်
ချော့မော့ပြီသာ မြန်မြန်ပြန်သွာအောင်သာ ပြောလိုက်ပါဗျာ...
အမေစုအတွက်က Driver လည်လိုမှမလိုသေးတာ
Go to Hell Phar Min Swe!
ဟေ့ ငကြောင်မင်းဆွေ ဆိုတဲ့ကောင် တိုက်ပွဲတခုမှာ ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ခင် ဆုံးရှုံးတာတွေ နစ်နာမှူ့ တွေဆိုတာရှိတယ်။ ရှိလဲရှိနေတယ် မင်းကိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးသိပ်ပြောစရာသိပ်မပြောချင်ဘူး။ ငါတို့့လူငယ်တွေထဲမှာမင်းထက်တော်တဲ့တတ်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာမင်းခေါင်းထဲစွဲနေအောင်မှတ်ထားလိုက်ပါ။ မင်းဟာတကိုယ်ကောင်းသမား။ အဲဒါကိုပညာသတိအမြင်ရှိတဲ့ လူဆန်တဲ့လူတိုင်းသိတယ်။ မင်းအခုရေးလိုက်တဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ မင်းဟာ ငကြောင်တယောက်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ မင်းအခုလုပ်ရပ်ဟာကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးနေတာ။ မင်းတူးတဲ့တွင်းပြီးသွားရင် မင်းကိုတွင်းထဲပို့ ပေးမဲ့သူတွေမင်းအနားမှာရှိနေပြီ။
ကြာကူလီ ရုပ်နဲ့ မင်းကဘာကောင်လဲ.......... အသေဆိုးနဲ့သေမယ့်ကောင်.............................................
ကိုယ်အနေနှင့်ပြောရလျှင်ထိုသူမှာငါးမင်းဆွေလည်းမဟုတ်၊ဖားမင်းဆွေလဲမဟုတ်၊ငါးဖြစ်ခဲလျှင်လည်းမျက်စိနှစ်လုံးအဖောက်ခံထားရသော(ငါးကိုဝစ္စနှစ်လုံးဖြုတ်ထားသော”ငါ”)၊ဖားဆိုလျှင်လည်းမျက်စိနှစ်လုံးမရှိ၍အမှန်မမှန်နိုင်ရှာသော(ဖားကိုဝစ္စနှစ်လုံးဖြုတ်ထားသော”-ါ”)သာဖြစ်၍အချုပ်ပြောရလျှင်မျက်စိမမြင်၍အမှန်မတွေ့ နိုင်သော”ငါ”အစွဲအတ္တဖုန်းလွမ်းနေသော”-ါ”ပါးစပ်ရှိသူတစ်ဦးသာဖြစ်ပါကြောင်း။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ကြပါ...ခုလုံခြုံရေးယူပေးနေသူတွေထဲမှာတောင်..အစိုးရသူလျှိုတွေပါနေတယ်လို့သတင်းရထားပါသည်..အားလုံးသတိရှိကြပါ...
danger alarm. sis khays starts reponse . alert alert alert alert alert people of burma. there is no two amay su so does no two aung san. all bro n sis of burma please take good care of amay su who will bring us all good things. all shan, kachin, kayin, mom, rakhine bro n sis defend amay su that will bring equality n prosperity to u.
ဖားမင်းဆွေ ဖာဆွေမျိုးတွေေုကာ်ူငာတယ် သမီးတွေမရှိဘူးလား
အိမ်ကခွေးကို အမှီးဖြတ်ပြီး ပေးစားမလို.
So strange, Be careful. He is blaming Daw Su for poor conditions of our country in every sector. Actually, he wasablind for past 22 years. Thus why he did not see what generals did during past 22 years.
သောင်းကျန်းနေတာ ကျနော် ဖားမင်းဆွေပါ
မင်းရုပ်မြင်တာနဲ့ အယုတ်တမာကောင်ဆိုတာ ရိုးသားဖြူစင် ပြည်သူ ဒို့အများ သိထားပါသည်။ မင်းအလုပ်ဟာ အပုတ်သက်သက်မို့ မြင့်မြတ်သော အလုပ်ကို အဟုတ်လုပ်နေတဲ့ ဒို့ခေါင်းဆောင်ကို ဒီလုပ်လုပ်တာ လမင်းကို မနာလိုလို့ ငုတ်တုတ်ထိုင် ဟောင်နေသော ခွေးဝဲစားလို ရင်ကွဲနာသေရုံဘဲပေါ့၊ မင်းငယုတ်မာဟာ မင်းတို့ ခေါင်းဆောင် အယုတ်တမာတွေနဲ့ အသွင်တူပေါင်းတာ သဘာဝပါ. မကောင်းစိတ်မွေး မကောင်းတာတွေလုပ် မကောင်းတာ ကြံစည် မင်းတို့ တစ်စုသည် မကောင်းလမ်း အောက်နရက် သို့ မကြာခင်ပင် ဒို့ပြည်သူတွေေ၇ာက်အောင် ပို့ဆောင်ပါမည်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သိပေတော့ ငမိုက်သားတစ်စုတို့......
ခဗျားကို NLD ရုံးထဲပေးဝင်တယ်ဆိုကတည်းကိုက ဒီမိုကရေစီ ဘာဆိုတာ နားလည်သင့်ပြီနော်.. ဒီမိုကရေစီဆိုတာ သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်ပဲ ကိုယ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတစ်ခုပါ။ ခင်များ ပြောချင်တာတွေ ဝေဖန်လိုတာတွေ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ရှိသလို၊ ကျုပ်တို့ပြောချင်တာတွေလည်း ခင်များရေးနေတဲ့ မီဒီယာတွေ ပြောပိုင်ခွင့်ပေးရင် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာဆိုတာ ခများသိလာမှာပါ။ ခုဟာ က ခများပြောနေတာတွေပဲ လိုက်ဖတ်ခိုင်းရအောင်လည်း လူဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမှ ဖတ်မှာပေါ့၊ အတင်းကြီးလိုက်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုကတည်းက ဒီမိုကရေစီမဟုတ်တာ.. ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဖတ်ချင်ဖတ်မယ်၊ စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်မယ်၊ စိတ်မဝင်စားရင် မဖတ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်။
ပုဂံသား မောင်ဘမော် said... :
ဖားမင်းဆွေဆိုတဲ့ ဒီ သောက်ခွက်ကို ဧရာဝတီဘလော့ဂ်မှ အမြန်ဖယ်ရှားလော့...
အမေစုရဲ. လုံခြုံရေးအား အထူးဂရုစိုက်ပေးကြပါရန်။
ဘာမဟုတ်တဲ့ ငကြောင်တကောင်ကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ.မျှော်လင့်ချက်တွေပျက်မှာစိုးရတယ်